उत्कृष्ट एसपीलाई यस्तो सजाय - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
काठमाडौं । अवैध रूपमा गिट्टी, ढुंगा र बालुवाको कारोबार गर्ने र राजनीतिक आडमा नाजायज फाइदा उठाउन चाहनेहरूको उद्देश्यमा ठेस पुगेपछि उनीहरूकै दबाबमा नवलपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (एसपी) दीपेन्द्र जीसीको अचानक सरुवा हुन पुगेको छ । आठ महिनाअघि सरुवा भएर नवलपुर आएका जीसीको अनायासै ३ नम्बर प्रदेश कार्यालय हेटौंडामा सरुवा गरिएको छ ।
संघीय ढाँचामा देश गएपछि नयाँ जिल्ला बनेको नवलपुरमा प्रहरीको कमान्ड सम्हाल्न पुगेका एसपी जीसीले जिल्लामा अवैध रूपमा गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको तस्करी गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्नुका साथै अनावश्यक राजनीतिक दबाबबाट आफूलाई मुक्त राखी निष्पक्ष रूपमा काम गर्दै आएका थिए । तर, कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष रूपमा काम गरेकै कारण उनलाई हठात् रूपमा सरुवा गरिएको बताइन्छ ।
२०७४ कात्तिक २५ गते नवलपुरमा सरुवा भएर गएपछि एसपी जीसीले जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने कार्यमा निकै जोड दिएका थिए । गएको माघमा विनयी खोलामा गिट्टी, बालुवाका लागि हालिएको टेन्डर एउटा समूहले च्यातेपछि उक्त समूहका मानिसहरूलाई कारबाही गरेपछि एसपी जीसीसँग केही व्यक्ति रुष्ट बनेका थिए । विनयी खोलामा चितवनको एउटा समूहले गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि टेन्डर हाल्दा केही स्थानीय युवाहरूले टेन्डर खोल्नुभन्दा अघिल्लो दिन टेन्डर च्यातेका थिए । उनीहरूले बाहिरी जिल्लाका मानिसले टेन्डर हालेको भन्दै च्यातेका थिए । टेन्डर च्यात्ने १० युवालाई एसपी जीसीले पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दा चलाएका थिए ।
एसपी जीसीलाई सरुवा गराउन केही व्यक्तिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, ३ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालासम्म पुगेको बताइन्छ । दुई महिनाअघि चोरमारामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य मकरध्वज गुरुङको विषयलाई लिएर उनका आफन्तहरूले नेताहरूलाई गुहारी एसपी जिसीलाई सरुवा गराउन दबाब दिएको आशंका गरिएको छ । दुई महिनाअघि रातिको समयमा गुरुङले चलाएको मोटरसाइकल चोरमारामा बिग्रिएर रोकिइराखेको ट्याक्टरमा ठोकिन पुगेको थियो । तर, उनका आफन्तहरूले ट्याक्टरले हानेर मृत्यु भएको जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले भने ट्याक्टरले हानेको नभई गुरुङको मोटरसाइकल ट्याक्टरमा ठोकिन पुगेको मुचुल्का उठाएको थियो । मृतकका आफन्तहरूले भने मृतकले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न निकायमा गुहारेको बताइन्छ ।
यसैगरी, गएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा देवचुली नगरपालिकाको प्रमुखका प्रत्यासी भई चुनाव हारेका सत्यनारायणले पनि एसपी जीसीलाई सरुवा गराउन दबाब दिएको बुझिएको छ । मतदानको दिन नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले एउटा बुथमा बम पड्काएको थियो । बम पड्किएपछि सत्यनारायणले मतदान स्थगित गर्न माग गरेका थिए । तर, बम पड््किएको केही समयपछि स्थिति सामान्य भएपछि मतदान सुचारु भएको थियो र सत्यनारायणको मागलाई प्रहरीले अस्वीकार गरेको थियो ।
यसैगरी, गैंडाकोट नगरपालिकाको वडा नं. १६ मा घटेको एउटा बलात्कार काण्डलाई गुपचुप रूपमा मिलाउन एसपी जिसीलाई प्रदेश नं. ३ का सांसद रोशन गाहाले दबाब दिएका थिए । उक्त बलात्कार काण्डमा क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थी समातिइएको थियो । तर, बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई गुपचुप रूपमा मिलाउन नसकिने अडान एसपी जीसीले लिएका थिए । सो प्रकरणपछि सांसद गाहाले पनि जीसीलाई सरुवा गराउन दबाब दिँदै आएको बताइन्छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको बेला राम्रोसँग कार्य सम्पादन गरेको भनी एसपी जीसीलाई पुरस्कृतसमेत गरिएको थियो । उनलाई एआईजी कमलसिंह बलमे उत्कृष्ट कार्य गरेको भनी केही समयअघि पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । तर, राम्रो कार्यसम्पादन गरेको भनी पुरस्कृत भएका एक प्रहरी अधिकृतलाई किन एकाएक सरुवा गरियो भन्ने कुरा रहस्यकै रूपमा रहेको छ ।